के तपाई सपनामा नाग देख्नुहुन्छ ? कस्तो नाग देख्दा मिक्छ शुभ सङ्केत ? हेर्नुहोस् ! | समाचार
November 3, 2021 NepstokLeaveaComment on के तपाई सपनामा नाग देख्नुहुन्छ ? कस्तो नाग देख्दा मिक्छ शुभ सङ्केत ? हेर्नुहोस् !
दुखद खबर- स्कुटी दु’र्घटनामा परी बुटवलमा २३ बर्षिया सुस्मिताको मृ’त्‍यु Rip
बाँदरलाई कान्छो छोरा बनाएका टिकटकमा भाईरल आमाछोरा मिडियामा । बाँदर पनि टिकटक बनाउन खप्पिस (भिडियो हेर्नुस)